Maxay yihiin ajandayaasha ugu waa-weyn ee shirka Kismaayo ee madasha maamul goboleedyada? - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandMaxay yihiin ajandayaasha ugu waa-weyn ee shirka Kismaayo ee madasha maamul goboleedyada?
Maxay yihiin ajandayaasha ugu waa-weyn ee shirka Kismaayo ee madasha maamul goboleedyada?
September 1, 2018 Puntland Mirror Jubaland, Puntland, Somalia 0
Madaxda maamul goboleedyada. [Sawir Hore]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Shirka madasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in 3-da September uu ka furmo magaalada Kismaayo.
Madasha maamul goboleedyada ayaa waxaa ku midaysan Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hir-Shabeele.
Ammaanka Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay iyada oo ciidamo badan la dhiggay waddooyinka muhiimka ah ee magaalada.
Ajandayaasha shirka madasha
Ajandayaal badan ayaa la filayaa in shirka looga hadlo waxaana ugu waa-weyn doorsahooyinka madaxtinimada ee ku soo fool leh saddex kamid ah madasha oo kala ah Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waxaa sidoo kale ajandayaasha ku jira khilaafka ka dhex-jira Galmudug, iyo xiriirka daciifka ah ee ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ka qeybgali doona shirka oo socon doona dhowr beri, sida qorshuhu yahay.
Waa shirkii 3-aad ee ay yeeshaan tan iyo markii la asaasay madasha maamul goboleedyada Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkii 2017-kii, waxaana guddoomiyaha madasha ah Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali.
Dadka siyaasadda Soomaaliya falaanqeeya ayaa sheegaya in mdashan la dhisay xilli ay jirtay cadaadis dowladda dhexe ee Farmaajo hoggaminayo ay ku heysay qaar kamid ah maamul goboleedyada sida Galmudug iyo Jubbaland, waxayna tani keentay in isku duubnida ay muujiyeen madaxda maamul goboleedyadu ay dib u dhigtay cadaadiskii ka imaanayay dowladda dhexe oo iyadu maamusha Muqdisho oo keliya.
Sidoo kale waxaa xilligii la asaasay madasha jiray khilaafyo waa-weyn oo saameyn ku yeeshay Soomaaliya uuna kamid ahaa khilaafkii Carabta kaasoo dowladda dhexe sheegtay in ay “dhex-dhexaad ka tahay”, balse maamul goboleedyadu ay badankood taageereen xulufada Sucuudiga.
September 2, 2018 Masuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo gaaray Kismaayo iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda
Madaxweynaha Soomaaliya oo wadahadalo la yeeshay dhiggiisa Shiinaha
Guddi labo dhinac oo ka socda Soomaaliya iyo Itoobiya oo kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay Addis Ababa
Ciidamadda badda Shiinaha oo saddex burcadbadeed ah ku wareejiyay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Markab uu Shiinuhu leeyahay ayaa saddex nin oo burcadbadeed looga shaki qabo ku wareejiyay haayadaha dowladda ee Puntland shalay oo Jimce ahayd, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters oo soo xiganaysa saraakiil [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay tuulada Sheerbi ee gobolka Karkaar, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Shilka ayaa xalay oo Axad ahayd gelinkii dambe dhacay kadib markii [...]
Wasiirkii Warfaafinta Soomaaliya oo loo doortay duqa cusub ee Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirkii Warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo loo yaqaan Yariiswo ayaa loo doortay duqa cusub ee magaalada Muqdisho, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta [...]